Manasa anao i Geofumadas hahafantatra ireo zavatra vita an-tserasera amin'ny vavahady IGN Spain! - Geofumadas
Geofumadas dia manasa anao hahalala ny gazety an-tserasera ao amin'ny vavahadin'i IGN Espagne!
Novambra, 2017 Cartografia, Internet sy Blogs, Pirinty voalohany
Previous: Ny fikarakarana ny zava-drehetra mifandray amin'ny jeografia sy ny fampandrosoana ny sarimihetsika any amin'ny firenena tsirairay dia niteraka ny fananganana masoivohon'ny governemanta izay miandraikitra io asa lehibe io. Amin'ny toe-javatra sasany miankina amin'ny Minisiteran'ny Fiarovana na ny iray hafa araka ny tabilan'ny fandaminana ao amin'ny firenena tsirairay, ireo karazam-piofanana ireo dia afaka mitondra anarana hafa. Izany no ananantsika Military Geographic Institute(IGM) ao Ekoatora na ny National Geographic Institute any amin'ireo firenena toa an'i Espana, Guatemala na Peru. Ny sasany, toy ny tany Arzantina, dia teraka dia IGM ary lasa IGN. Saingy, na eo aza ny fitantanan'izy ireo sivily na miaramila, ny fiasa tany am-boalohany dia mitovy. »
Na dia manana vavahadim-pifandraisana aza ny ankamaroan'ireo fikambanana ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia vitsy amin'izy ireo no manome tombontsoa, ​​kalitao ary fampahalalana mahasoa ho an'ny besinimaro. ambonin'izany rehetra izany for free.
Izany no antony, androany isika dia manolotra ny fitsidihana virtoaly mba hahafantarana ny sasany amin'ireo fitaovana izay IGN Espaina manome ho an'ny mpampiasa aterineto. Tsidiho ny fampiasana karazana pseudo-metaverse izay hiantso antsika Iberika ary ny vaovao farany indrindra Avatar (ny sary eo ankavanana) dia hitsidika ireo toerana izay nisarika ny sainay izahay ary izany, manantena izahay, handrisika anay hanao fanadihadiana amin'ny antsipiriany bebe kokoa taty aoriana. Miaraka aminay ve ianao?
Ny fiandohan'ny dia
To enter Iberika tsy maintsy mandeha mamaky ny habakabaka isika ary mamantatra ny tenantsika any Madrid, Espana. Natao manokana tao Calle Gral.Ibáñez de Ibero, 3 28003. Araka izany dia nanamboatra ny fehikibo izahay ary lasa nandeha. Haingana ny dia ary segondra vitsy dia hitantsika ilay toerana.
Tonga soa aman-tsara izahay. Midina izahay ary voahodidin'ny andiana trano miloko biriky. Volana mivoaka sy miditra. Ny varavarankely kely misy ny zana-kazo fotsy mameno ny seta. Mandroso amin'ny patio lehibe izahay ary eo anoloan'ny varavarana fidirana izahay. Miditra isika. Tonga miaraka amina tanjona voafaritra izahay, noho izany, aorian'ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany dia mankany amin'ny faritra Publications izahay. Nolazain'izy ireo taminay fa misy fomba haingana sy mivantana hankanesana any. Raisinay ny soso-kevitra ary mifantoka amin'ny fitadiavana ny hitsin-dàlana izahay izao. Raha nampiasa ny 'sarintany mahazatra' natolotra ny besinimaro izahay dia ho tonga toy izao:
Mampiseho ny vaovao voarakitra
Niandry tamim-pahavitrihana izahay dia nankany amin'ny toerana voatondro ary taorian'ny namakivaky ny lalantsara, dia nahita varavarana telo izahay, samy nanana famantarana famantarana. Tsy maintsy mifidy izay hanombohana. Manomboka amin'ny iray eo ankavia izahay:
a) Ny varavarana boky
Manoloana ny talantalana izay mampitombo ny isan'ireo volavolan-dry zareo isaky ny mandeha matetika. Ny kopia dia aseho toy izao:
Amin'ity faritra ity izao 28 kopia Afaka vakiana sy rindrambaiko maimaim-poana izy ireo amin'ny endrika samihafa.
First Tip: Satria ny lohateny dia mandrakotra faritra samihafa sy tombontsoa, ​​heverintsika fa mety hahasoa izany manasokajy ireo kopia natolotra, ity dia ho fanampiana hanamorana ny fikarohana:
Analysis and News · Ny krizy, ny fanatontoloana ary ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy faritany any Espana
cartographical Cartographers Espaniola
· Tantaran'ny vina sary
Ny tontolon'ny sarintany
· Cartografia momba ny fibodoana tany any Espana. Tetikasa SIose.
Geodesy sy Astronomia Fanontaniana momba ny fanandroana
Ny fandrefesana ny tany eo anelanelan'ny 1816 sy 1855
manan-tantara · Ny fanadihadiana momba ny topografia-parcel an'ny Birao momba ny statistikan'ny ankapobeny ao amin'ny tanànan'i Almería (1867-1868)
· Ny fanadihadiana amin'ny topografia-parcel an'ny Birao misahana ny statistikan'ny ankapobeny ao amin'ny tanànan'i Soria (1867-1869)
· Ny Planimetry an-tanàn-dehibe any Granada natsangan'ny Birao Iraisam-pirenena momba ny Antontanisa (1867-1868): tetik'asa tsy vita
· Ny Tetikasan-tsarintany nasionaly lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny solontenan'ny faritany ao Castilla y León
Sarintany sy mpaka sary amin'ny ady an-trano Espaniola (1936-1939)
· Ny planimetry an'i Madrid tamin'ny taonjato faha-XIX
· Tantara momba ny famaritana ny sisintany Espaniôla-frantsay: Nanomboka tamin'ny fifanarahana Pyrenees (1659) ka hatramin'ny Treaties of Bayonne (1856-1868)
Miscellaneous Tantaran'ny mpandrefy tany an-tsaha
Dia mankany amin'ny Sierra de Segura
Avy amin'ny ranomasina ka hatrany Venus
fitsipika Torolàlana momba ny fenitra
Tantaran'ny Amerika Latina an'ny LAMP Metadata Version 2
seismicity · Teôria momba ny fihanaky ny onjan-dranomasina. Onja Lg
· Fanavaozana ny sarintanin'ny loza mitatao amin'ny Espana 2012
IDEE - Data ara-tontolo iainana ara-toekarena · Fihaonambe Iberiana III momba ny fotodrafitrasa momba ny angon-drakitra (2012)
Fihaonambe IV Iberiana momba ny fotodrafitrasa momba ny angon-drakitra (2013)
Fampidirana ireo fotodrafitrasa momba ny angon-drakitra
Blog IDEE, hafatra 1000
· Ny fototry ny fotodrafitrasa momba ny angon-drakitra
toerana anarana Torolàlana Toponika ho an'ny fampiasana iraisam-pirenena ho an'ny mpanonta sarintany sy famoahana hafa
· Toponymy: fenitra ho an'ny MTN25. Hevitra fototra sy voambolana
Ny boky tsirairay dia manana "rakitra katalaogy" izay manome antsika famaritana fohy momba ny atiny ary koa ny fampahalalana toy ny mpanoratra, Datin'ny fanontana ary isan'ny pejy. Vantany vao voafidy ny lohateny, dia hitantsika ireo endrika misy ary mahazo "copy " izany Tsotra, sa tsy izany?
Second Tip: Andao haka boky roa ny fanehoan-kevitra momba ny fahatsapantsika. Fantatra tsara ny fitiavantsika sarintany ka ny safidy voalohany dia tsy mahagaga anareo. Ny safidy faharoa dia mifandraika amin'ny zavatra niainan'ny asantsika. Andeha hojerentsika:
Ny Tontolon'ny Maps Izy io dia manavaka amin'ny famakiana sy ny fahatakarany mora foana. Raha mijery ny mari-pamantarana ankapobeny isika, dia mahatsikaritra rafitry ny votoatin-javatra voalamina tsara amin'ny lohahevitra. Tombony ho toy ny lahatsoratra iray ho an'ny mpandray anjara ary manomboka koa. Soso-kevitra tsara. Manorata.
Tantara momba ny mpikaroka iray ao amin'ny sokajy Miscellaneous, io boky mahafinaritra io dia afaka manome fotoana mahafinaritra ho antsika ary azo antoka fa hampahatsiahy antsika ireo tantara niaina na henon'ny mpiara-miasa. Ary na dia nampitandremana aza izahay mba tsy hianjera procastinación, ny famakian-teny tahaka izao dia afaka manampy antsika hitsahatra amin'ny fialam-boly. Manoritra ny boky.
b) Ireo Bulletins avy amin'ny Door
Ny Bulletins an'ny IGN sy CNIG dia natao hanaparitaka ny asan'ny orinasa. Azo alaina ao amin'ny format PDF, ilay nivoaka farany dia hatramin'ny volana Septambra. Araka ny efa nampoizina, afaka miditra amin'ireo nomera teo aloha ianao amin'ny fisafidianana ny taona ary avy eo ny volan'ny gazetim-pifidianana.
c) Ny bokin'ny Publications
Miatrika varavarana farany amin'ny fitsidihana virtoaly izahay. Miala sasatra kely izahay mialoha ny hanohy. Asehony fa ao anatin'ity efitrano farany ity dia misy fampahalalana marobe. Andao hijery izany Hiditra isika Manana efitrano efatra izahay. Andao hanomboka:
c-1) Tatitry ny Tetikasa. Raha te-hahazo tatitra isan-taona momba ireo hetsika nataon'ny IGN sy ny CNIG ianao dia ity no toerana mety. Manontany izany izahay ary manondro fa ny tahirin-kevitra farany dia avy amin'ny taona 2015.
c-2) Famoahana sy Biraon'ny Seismic. Azo antoka fa io no toerana ahitana ny fampahalalana betsaka indrindra. Ireo mpikaroka geofumed dia ho faly eto tsy misy ahiahy. Mitaky "fantsona lalina" amin'ny votoatin'ny sehatra efatra (4):
Tatitra sy ny boky hafa
Fikarohana momba ny horohoron-tany tokana
Amin'ny maha-horonantsary kely anay, dia avelanay hitazona ny ao anatin'ny rakitsary "Reports et publiques hafa":
c-3) Injeniera: Teknolojia sy Bibliography (taona 2008). Io sehatra io dia ahitana ny dabilio fototra sy ny boky ara-dalàna nomena azy mba hanampy amin'ny fanomanana ny hahazo ny fanoherana amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny asa soratra azy. Fanamarihana ny momba ny Bibliôgrafia azonao atao ny mahita ny fidirana amin'ny antontan-taratasy samihafa nivoaka tamin'ny Internet. Ireo izay maniry ny hamerina ny hevitra dia asaina handinika tsara:
c-4) kalandrie. Te-hahazo ny kalandrie sy ny portas amin'ny taona manaraka ve ianao? Eny, ny IGN dia manome anao ny iray ho fahatsiarovana ny fitsidihanao. Feno fankasitrahana izahay ary manoro hevitra: Manararaotra!
Fotoana lavitr'ezaka, tsy misy isalasalana, eny an-dalana, mamelabelatra am-pitiavana izy ireo ary manasa antsika hiverina rehefa maniry isika, izay ankasitrahanay. Ankehitriny dia tsy maintsy miverina isika ary mandao an'i Ibero. Countdown. Miverina tsy misy tranga izahay. Manantena izahay fa nahita ilay fitsidihana mahaliana sy mampianatra. Tsarovy fa ny adiresy dia www.ign.es. Mandra-pahatongan'ny fahafahana vaovao!
Previous Post«Previous III Fihaonambe isan-taona an'ny tambajotran'ny Cadastre Inter-American
Next Post Ahoana ny fampidinana ny AutoCAD 2018 - kinova fanabeazanamanaraka »